Maitiro ekubatanidza Alexa kune magetsi to Emulator.online ▷ 🥇
Magetsi emagetsi hapana mubvunzo danho rekutanga kuunza kumba pfungwa yekushandisa pamba, ndiko kuti, kudzora kure (kunyangwe nerubatsiro rwemirairo yezwi) yemidziyo yedu yese yemagetsi. Kana isu tafunga kutenga imwe kana anopfuura smart bulbs uye isu taida kudzora iwo nezwi rairo rinopihwa neAmazon Echo uye Alexa, mune ino gwara tinokuratidza maitiro ekubatanidza Alexa kune mwenje uye ndeapi mirairo yezwi yatinogona kushandisa pavari.
Sechitsauko, isu tinokuratidza kuti ndeapi mwenje mwenje anonyatso kuenderana ne Alexa neAmazon Echo, kuve nechokwadi kuti iwe unogona kunyatso kumisikidza mirairo yezwi kwavari.
VERENGA ZVIMWE: Amazon Alexa: Maitiro Ekugadzira Maitiro uye neNew Voice Commands
Mwenje nemapulagi anoenderana neAmazon Alexa
Tisati taita chero chinhu nemirairo yezwi, isu tichafanirwa kuve nechokwadi chekuti mwenje mwenje unowirirana ne Alexa; kana zvisina kudaro hatizokwanise kuvawedzera kuhurongwa uye nekudzora vari kure. Kana isu takatotenga mwenje mwenje, tinotarisa kuti "Amazon Alexa inoenderana" kana "Amazon Echo inoenderana" inotsanangurwa pakurongedza kana mubhuku.
Kana tisina magetsi anoenderana kana mababu, tinogona kufunga nezvekutenga imwe Alexa inoenderana LED mwenje, senge iwo mamodheru akanyorwa pazasi.
Philips Kuvhenekesa Hue White Lampadine LED (€ 30)
Bulb TP-Link KL110 Wi-Fi E27, Inoshanda neAmazon Alexa (€ 14)
Smart girobhu racho, LOFTer E27 RGB 7W WiFi ngwara girobhu racho (€ 16)
Smart girobhu E27 AISIRER (zvidimbu zviviri, 2nd €)
TECKIN E27 multicolor inopera smart smart bulb (€ 49)
Kana, pane zvinopesana, isu tichizoda kushandisa zvekare mababu atinotova nawo (pasina kuenderana), tinogona zvakare kufunga nezve kutenga smart adapters kune chero girobhu.
Isu tinoda kuchinjisa mwenje mumba yekutandarira kana yekurara (idzo dzine mahwendefa chaiwo)? Mune ino kesi, isu tinogona kusevha pakutenga smart bulbs nekutarisa panzvimbo peye smart Wi-Fi zvigadziko, senge iwo akanyorwa pazasi.
Presa Akangwara WiFi Smart Plug Telecomando ZOOZEE (€ 14)
Philips Hue magetsi socket (€ 41)
TP-Unganidzo HS110 Wi-Fi socket ine simba rekutarisa (€ 29)
Smart Plug WiFi Smart Plug Simba rinotarisa plug (zvidimbu zvina, € 4)
Zvese zvigadzirwa zvakanyorwa zvinoenderana neA Alexa, zvese zvatinofanirwa kuita kuzvibatanidza kune yedu yeWi-Fi network (kuteedzera rairo iri mushandisi bhuku), shandisa iwo akasiyana mafomu kumisikidza kure kure kuwana (isu tinozobvunzwa kuti tigadzire account nyowani ) Uye, chete mushure meiyi yekutanga setup, ndipo patinogona kuenderera neiyo Alexa setup.
Unganidza mwenje kuAmazon Alexa
Mushure mekubatanidza smart bulbs (kana akakurudzira mapulagi kana maadapter) uye nekuva nazvo zvakaringana zvakabatana neimba yeWi-Fi network, ngatitorei smartphone uye isa iyo app Amazon Alexa, inowanikwa neApple uye iOS.
Mushure mekurodha pasi Anwendung, vhura iyo uye upinde mukati medu Amazon account Kana tisina account yeAmazon parizvino, tinogona kukurumidza kugadzira imwe mukati meapp kana pawebhusaiti yepamutemo.
Mushure mekupinda mukati, tinodzvanya Devices Muzasi kurudyi, sarudza bhatani + kumusoro kwepamusoro uye pinda Wedzera mudziyo. Muchikona chitsva tinosarudza sarudzo zvichienderana nerudzi rwechigadzirwa chekugadzirisa: Bulb yechiedza kugadzirisa smart bulb; Bepanhau kana dai taive ne plug yakangwara kana Shanduko kana isu tanga tasarudza iyo Wi-Fi adapta yemamwe mabhuru.
Zvino ngatipindei Chii chinonzi ?, tinosarudza mhando yechishandiso chedu, tinosarudza bhatani Ramba wakadaro tobva tabata chinhu Gonesa kushandisa; ikozvino tichazobvunzwa magwaro ekuti tiwane sevhisi inosanganisirwa nemwenje, plugs kana switch dzinotengwa (sekuonekwa muchitsauko chakapfuura) Paunenge iwe waisa iwo akakodzera matsamba, ingo sarudza Batanidza izvozvi kuwedzera kudzora kwekushandisa mukati Alexa.
Kana iyo mhando yechigadzirwa ikaonekwa, tinogona kugara tichibata Zvimwe uye nemaoko gadzira chishandiso, kuti chioneke mukati me Alexa. Mushure mekubatanidza, isu tinongofanirwa kusarudza zita rechishandiso, mune imwe kamuri kana chikamu chekuisa (Kicheni, Living room, nezvimwewo) uye tinya Zvaitwa.
Muchitsauko chinotevera tichakuratidza maitiro ekushandisa mirairo yezwi kudzora mwenje ne Alexa.
Izwi rinoraira kubata mwenje
Mushure mekuwedzera zvese zvishandiso kuApple app, tinogona kushandisa mirairo yezwi kubva kuApple app kana paAmazon Echo yakagadzirirwa neakafanana account yeAmazon inoshandiswa pakuseta.
Heino runyorwa rwemirairo yatinogona kushandisa kubata mwenje ne Alexa:
"Alexa, batidza mwenje [stanza]"
"Alexa, batidza [mudziyo wediki]"
"Alexa, batidza mwenje yese yekutandarira"
"Alexa, dzima mwenje wese irimo mumba"
"Alexa, batidza mwenje wemba yekutandarira na6 masikati"
"Alexa, ndimutse na8 manheru ndobatidza malights ese ari mumba"
Aya angori mamwe emirairo yezwi yatinogona kushandisa kana mwenje yaiswa kuA Alexa. Kuti uwane rumwe ruzivo, tinokukoka iwe kuti uverenge gwara redu ku Zvimiro zveAmazon Echo, ndezvipi uye ndezvei.
Chikamu chakakosha chemba otomatiki emangwana kuvepo kwemagetsi emagetsi anogona kudzorwa kuburikidza nevabatsiri vezwi vakaita seAmazon Alexa, izvo zvinokutendera iwe kuve nepamusoro pekutonga pamusoro pemidziyo inoenderana.
Kana isu tichida kuita shanduko dzakafanana neGoogle Imba (uye nekudaro tora mukana weGoogle Mubatsiri) tinokurudzira kuti uverenge chinyorwa chedu pa Zvinogona kuitwa neGoogle Imba: izwi mubatsiri, mimhanzi uye otomatiki epamba. Haisi chokwadi chekusarudza pakati peAmazon Alexa neGoogle Imba? Tinogona kuwana mhinduro zhinji kumibvunzo yako mukuongorora kwedu kwakadzika. Alexa kana Google Imba? kuenzanisa pakati pevanyanzvi vakanyanya kutaura uye nevakangwara.